गाईगोरु तस्करी नगर्ने शपथ « Loktantrapost
१९ कार्तिक २०७६, मंगलवार १९:४८
भद्रपुर, १९ कात्तिक (रासस) : वर्षौदेखि गाईगोरु तस्करीमा संलग्न दक्षिण झापास्थित कचनकबलका पाँच जनालाई अबोप्रान्त तस्करी नगर्न भन्दै प्रहरी, जनप्रतिनिधि र समुदायसमक्ष शपथ खुवाइए
यही तिहार अघि गोरु तस्करी गर्दागर्दैको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेका उनीहरुलाई आजदेखि तस्करी नगर्ने शपथ खुवाएर छाडिएको हो । जिल्लाका प्रहरी प्रमुख दिनेश मैनालीको उपस्थितिमा समुदाय प्रहरी साझेदारी झापाको आयोजनामा आज भएको विशेष कार्यक्रममा कचनकबल गाउँपालिकाका प्रमुख अन्जार आलमले शपथ गराउनु भएको थियो ।
कचनकबल गाउँपालिकाको सदरमुकाम बनियानी बजारमा गाईगोरुको तस्करी रोक्ने विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । तर कार्यक्रममा पदाधिकारीहरुलाई शपथग्रहण गराए जसरी नै तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई शपथग्रहण गराइएको थियो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष आलमले शपथ गराउँदै माइकबाट ‘म आजदेखि गाईगोरुको तस्करी गर्दिन, कानून विपरीतका कुनै पनि गतिविधि गर्दिन’ भन्न लगाउनु भएको थियो । तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका ५ जना स्थानीयवासीले अध्यक्ष आलमले जे माइकबाट भन्नुभयो, त्यसैलाई दोहोर्याएर वाचन गरेका थिए ।
कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष आलमले सीमा क्षेत्रमा चौपायाको तस्करी गर्नेहरुलाई फकाएर र सम्झाएर अबैध गतिविधिबाट मुक्त गराउन शपथग्रहणको उपाय अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले तस्करीमा संलग्न भएर पक्राउ परेका व्यक्तिहरु भोट दिएर जिताएको नेता भन्दै आफुसमक्ष छुटाइदिन सहयोगका लागि आउने गरेको चर्चा गर्दै त्यस्तो गैरकानूनी काम गर्नेलाई संरक्षण नगर्ने बताउनुभयो ।
झापाको प्रहरी प्शासन पछिल्लो समय गाईगोरुको तस्करीलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लागेको जनाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एवम् प्रहरी उपरीक्षक दिनेश मैनालीले गैरकानूनी कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिहरुलाई स्थानीय समुदायको आग्रहमा शपथ खुवाएर छाडिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
झापाको पूर्वी र दक्षिणी सीमा क्षेत्रबाट वर्षौदेखि गाईगोरुको तस्कर हुँदै आएको छ । तर केही महिनादेखि झापाको प्रहरीले रोक्नेतर्फ सक्रियता बढाएको छ । प्रहरीले बाहिरबाट तस्करीका लागि ल्याएका गाईगोरुलाई राजमार्गबाटै नियन्त्रणमा लिने र सीमा क्षेत्रबाट भारततर्फ लैजान नदिने नीति लिएको प्रहरी उपरीक्षक मैनाली बताउनुहुन्छ ।
तस्करी नगर्ने शपथ लिएका कचनकवल–४ का जलाल मियाले गाइगोरुको तस्करी धन्धा छाडेर अब धान काट्ने मजदूरी पेशा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरु पेशेवर तस्कर नभएर परिवार पाल्नका लागि गाईगोरुको हन्जालाई सीमा कटाइदिने मजदुर भएको बताउनुभयो ।
‘एक हल गोरु नेपालबाट सीमा कटाएर विहार पुर्याएवापत रु. पाँच सय पाइन्थ्यो’, मिया भन्नुहुन्छ, ‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रहरी सरहरुले यस्तो धन्धा नगर्न धेरै सम्झाउनु भयो, चित्त बुझ्यो र अब गोरु धपाउन छाडेर खेती मजदुरी गर्ने विचार गरेको छु ।’
झापाका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश मैनालीले शपथ खुवाउने कार्य अनौठो लागे पनि सीमा क्षेत्रमा धमाधाम लागेका सोझासीधा व्यक्तिहरुलाई गैरकानूनी गतिविधिबाट मुक्त गराउन यस्तो उपाय प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको छ ।
झापा जिल्ला लामो समयदेखि पशु चौपाया तस्करीको ट्राजिन्टपोइन्ट बन्दै गएको बताउँदै उहाँले तस्करीको जालो प्रहरीले पुरै तोडिसकेको दावी गर्नुभयो । उहाँले गाईगोरु तस्करी हुनै नसक्ने गरी नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिएको जनाउँदै चौपाया तस्करीमुक्त जिल्ला बनाउनका लागि स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरुको सहयोग जरुरुत हुने बताउनुभयो ।
प्रहरीले आज विहान कनकाई नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित तुलसीबारीबाट दुई ट्रक गोरु भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर भद्रपुर भन्सारमा बुझाएको छ ।
प्रहरीले तस्करीमा प्रयोग भएको ना.५ख ५९४६ र ना ६ ख ३८४१ नम्बरको ट्रक समेत भन्सारमा बुझाएको छ ।